विएण्डसी हेल्थ विशेष Archives - Page 20 of 20 - Ujyaalo Nepal
घिसार्न खोज्दै प्रहरी अनि जान्न जान्न भन्दैमा पारशले कसरी प्रहरीलाई दुव्र्यवहार गरेको ठर्हछ ?
फास्ट ट्रयाकको काम निर्धारित समयमै पूरा गर्ने नेपाली सेनाको दाबी
पावर बैंक किन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् !
Ujyaalo Nepal	 १० चैत्र २०७४, शनिबार १०:०९
लामो यात्रामा जाँदा मात्र होइन, हिजोआज अफिस जाँदा पनि पावर बैंक साथमा राख्नुपर्छ । किनकि धेरै फोन चलाउँदा जतिखेर पनि ब्याट्री सकिन सक्छ । एन्ड्रोइड फोनमा केही यस्ता एपहरु पनि हुन्छ जसलाई चलाउँदा ब्याट्री तत्कालै सकिन्छ । त्यसैले पावर बैंक…
के हो वाइन कण्डम ?
Ujyaalo Nepal	 ९ चैत्र २०७४, शुक्रबार १०:२५
एजेन्सी । कण्डमलाई परिवार नियोजनको भरपर्दो साधनको रुपमा अथ्र्याइन्छ । तर, अब शारीरिक सम्पर्कका बेला मात्रै होइन पेय पदार्थ वियरको सुरक्षाको लागि पनि कण्डम प्रयोग हुन थालेको छ । अब वाइनको बोतल खोलेर पुरै खान सकिएन भने पनि अब चिन्ता…
थाहा पाउनुहोस्, यी ७ संकेत तपाइँको मोबाइल कसैले ह्याक गर्दैछ !
Ujyaalo Nepal	 ८ चैत्र २०७४, बिहीबार १०:०३
तपाइँको गोजीमा रहेको मोबाइल फोनमा तपाइँसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण निजि तथा गोप्य जानकारीहरु हुन सक्छन् । साथीहरुको तस्वीरदेखि लिएर कार्यालयका जरुरी फोन नम्बरमात्र नभै विभिन्न अकाउन्ट सम्बन्धी जानकारी । यी सबै कारणले गर्दा मोबाइल…
सेल्फी फेसन कि दुव्र्यसन र रोग ?
Ujyaalo Nepal	 ४ चैत्र २०७४, आईतवार ०२:२०
यु.एन. न्यूज । सेल्फी लिने र सामाजिक सञ्जालमा राख्ने प्रचलन विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो छ । आजकाल यो मानिसहरुको दैनिकी नै बढ्दो छ । तर, मनोविज्ञहरुले भने एकै दिनमा पटक–पटक सेल्फी लिनु मानसिक समस्या हुन सक्ने बताएका छन् । यसलाई उनीहरुले…
Ujyaalo Nepal	 ३० फाल्गुन २०७४, बुधबार ०४:२०
एजेन्सी । स्मार्ट घडी र गूगल ग्लासपछि विश्वमा वेरेबल ( शरीरको कुनै अंगमा लगाएर हिड्न मिल्ने) प्रविधिप्रति रुचि बढ्दो छ । घडी र चश्मापछि अब नयाँ–नयाँ प्रडक्ट बजारमा उत्रिदै छन्। यसैक्रममा एक नयाँ प्रविधि ‘स्मार्ट कण्डम’ बजारमा आउने…
मोबाइल Slow भए के गर्ने ?
Ujyaalo Nepal	 ३० फाल्गुन २०७४, बुधबार ०४:१०
मोबाइल अहिले अपरिहार्य उपकरण भइसकेको छ । नयाँ पुस्तालाई मोबाइलविनाको दिनचर्याको कल्पना गर्न पनि गाह्रो भइसकेको छ । यो अपरिहार्य र महत्त्वपूर्ण उपकरण ह्याङ भइदिँदा धेरैलाई झोक चलेको हुनुपर्छ । जुन बेला मोबाइल प्रयोग नगरी नहुने अवस्था आउँछ,…
फेसबुक, ट्वीटर चलाउन नपाउँदा टेन्सन हुन्छ ? एक पटक पढ्नुस्
Ujyaalo Nepal	 ३० फाल्गुन २०७४, बुधबार ०४:१५
के तपाईको सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट छ ? फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राफ, ह्वाट्सएप… अन्य थुप्रै.. तपाई यीनलाई दिनमा कति पटक चेक गर्नुहुन्छ ? नयाँ म्यासेज, लाइक, रिप्लाई वा कमेन्ट हेर्नको लागि तपाई सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट कयौं पटक लग इन गर्नु…